Markab laga leeyahay Iiraan oo lagu weeraray Badda Cas - Wardeeq 24 TV Markab laga leeyahay Iiraan oo lagu weeraray Badda Cas Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Markab laga leeyahay Iiraan oo lagu weeraray Badda Cas
Markab laga leeyahay Iiraan oo lagu weeraray Badda Cas
Markab xamuul oo laga leeyahay Iiraan oo la rumeysan yahay inuu saldhig u yahay ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga (IRGC) oo sanado ku xirnaa badda cas meel ka baxsan Yemen ayaa la weeraray.
Wasaaradda arrimaha dibedda Iran ayaa Arbacadii xaqiijisay weerarka, iyada oo sheegtay in MV Saviz uu haleelay qarax aan la garanayn oo sababay “waxyeello yar” abbaaraha 6-da subaxnimo ee maxalliga ah ee Badda Cas Talaadadii, kuna dhow xeebta Jabuuti.
Markab laga leeyahay dalka Iiraan ayaa ku dhacay weerar ka dhacay badda Mediterranean-ka, sida ay sheegtay shirkadda
Markab laga leeyahay Israa’iil ayaa ku xirtay Dubai ka dib markii qarax lala yaabo
Qarax ayaa ku dhacay markab xamuul oo ay leedahay Israel oo marayay Gacanka Cumaan
Iiraan ayaa sheegtay in wadahadaladii ugu horreeyay ee Niyukleerka ee lala yeeshay quwadaha adduunka ‘wax dhisaya’
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Saciid Khatibzadeh ayaa sheegay in markabka Saviz uu yahay markab aan militari ahayn oo si rasmi ah uga diiwaangashan Hay’adda Badaha Caalamiga ah ee u shaqeysa sida “saldhigga saadka” ee Iiraan ee Badda Cas, oo bixisa adeegyo la-dagaallanka burcad-badeedda.
“Nasiib wanaag wax dhimasho ah lama gaarin dhacdadan darteed, iyo qiimeyn farsamo oo ku saabsan sida ay wax u dheceen iyo halka ay ka timid ayaa socota,” ayuu yiri.
Weerarku wuxuu yimid markii Iran iyo quwadaha adduunka ay fadhiisteen Vienna wadahadalladii ugu horreeyay ee ku saabsan Mareykanka oo dib ugu soo laaban kara heshiiskii Niyukliyeerka ee Tehran, taasoo muujineysa in caqabadaha horyaalla aysan ku koobnayn oo keliya wadahadalladaas.
Previous articleCarada ka dib markii Pakistan’s Imran Khan xiriir la leh kufsi iyo sida dumarka u labistaan
Next articleRasaasta madaxa ’: Dagaalkii Yemen ayaa fure u ahaa xiisadda Iran iyo Mareykanka